कस्तो नि’र्दयी सं’स्कार ! किन गरिन्छ छोरीको यो’नी छे’दन ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
कस्तो नि’र्दयी सं’स्कार ! किन गरिन्छ छोरीको यो’नी छे’दन ?
महिलाको यो’नि छे’दन गर्ने एक नि’र्दयी सं’स्कारलाई का’नूनी रुपमा प्रति’बन्ध लगाइएपनि अझै पनि विश्वका कतिपय देशहरुमा यो प्रचल’न कायमै रहेको छ । भारतको एउटा सानो बोहरा मु’स्लिम समु’दायमा यो कु’प्रथा अझै पनि विद्यमान छ । बोहरा समुदायका महिलाहरुले स्वास्थ्यसँग प्र’त्यक्ष सरोकार राख्ने यस कुस’स्कारला’ई हटा’उन विभिन्न अभियान चालेका छन, तथापी यस कु’प्रथामा कुनै क’मि आएको छैन् ।
जसका कारण अधि’कांश महिला स्वास्थ्यमा ग’म्भीर सम’स्या उत्पन्न भएको छ ।मा’सुमा रानालभी सात वर्षकी हुँदा उनकी हजुरअमाले आइसक्रिम र चकलेट किनिदिने प्र’लोभन देखाएर घर बाहिर लैजान्छिन् । च’क’लेट खाने भन्दा उनीमा ग’दगद हुन्छिन् । ‘म निकै खुसी थिए । तसर्थ उनीसँगै म हिडें,’ उनी स्मरण गर्छिन् ।
उनीहरुले मेरो यो’नी तन्का’एर केही चिज का’टे । मलाई ख’पिन’सक्नु पि’डा भयो । ड’रले चि’च्चाए । त्यसपछि उनीहरुले का’टेको ठाँउमा केही का’लो पा’उडर छर्किदिए ।
‘हजुरआमाले मलाई एउटा पु’रानो र जी’र्ण भवनमा पु¥याएपछि भने मेरो म’नमा चि’सो प’स्यो । त्यसपछि उनले मलाई एउटा कोठामा लगिन् । मलाई भु’इँमा ओ’छ्याइएको एउटा कार्पे’टमा बस्न लगाइयो । तत्कालै मेरो पाइ’न्ट खो’लियो,’ सो घ’टनाबारे उनी बे’लिबि’स्तार लगाउछिन्, ‘उनले मेरो हात समाईन भने अर्की महिलाले खु’ट्टा । त्यपछि उनीहरुले मेरो यो’नी तन्का’एर केही चि’ज का’टे
मलाई ख’पिनस’क्नु पि’डा भयो । ड’रले चि’च्चाए । त्यसपछि उनीहरुले का’टेको ठाँउमा केही का’लो पाउ’डर छ’र्किदिए । पाइ’न्ट लगाइदिए र हजुआमाले मलाई घर लगिन् । ’ यो घट’ना ठीक ४० व’र्ष अगाडिको हो । सो घ’टना सम्झेर रानालभी झै पनि दु’खित र ल’ज्जाबोध हुन्छिन् । यसै महिना उनीलगायत अन्य पी’डित महिला महिलाको गु’प्तां’ग ‘छे’दन (फि’मेल जे’निटिय म’ल्टिलेसन अर्थात एम’एमजी) बि’रुद्ध अभिया’नमा संलग्न भएकी छिन् ।
यो’नीछे’दन विधि विभिन्न जा’तीय समूहहरुबीच फरक फरक हुन्छ । जस्तैः यो’नीको भंगा’कुर पत्र र मु’न्डलाई हटा’इन्छ भने कुनै समुदायले यो’नी मुखको भित्रि भो’गस्ठ (ले’बिया) लाई हटा’उछन् । मु’त्र निका’स हुन र मा’सिक धर्मको समयमा अब’रोध नहोस भनेर सानो द्वार राखिएको हुन्छ । स’हबा’स र बच्चा जन्माउँदा यो’नी आफै खुल्ने बताइन्छ । यस पक्रियाले यो’नीमा संक्रमण, दी’र्घका’लिन पी’डा र बच्चा ज’न्माउदा स’मस्या हुने बताइन्छ । चिकित्सा विज्ञानमा अहिलेसम्म यसको कुनै फाइदा उल्लेख गरिएको छै्न ।